Kuvandudza hutano hwako: Makiyi ekuti uve anofara | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Susana godoy | 28/04/2021 13:12 | Hukama
Wanga uchiziva here kuti kunatsiridza hutano hwako zvinoreva kunzwa uchifara? Izvi zvinodaro nekuti zvakabatana nehutano hwedu hwepanyama uye hwepfungwa. Iyi inguva yekunakidzwa, kuzvibvumira kuenda uye nekudaro, isu tinobatanidza zvese muviri nepfungwa. Saka kana zvese zviri zviviri zvakabatana, hapana chinogona kutadza!
Iye zvino zvaunoziva izvozvo bonde chinhu chakakosha muhupenyu hwako, Inofanirwa kuziva nhevedzano yemakiyi kuti ugone kugadzirisa ichi chinhu. Pasina kupokana, isu tese tinoda kufara, kuti tinoona izvo zvinopenya mumaziso edu uye kuti zuva rega rega idenho nyowani yatinoisa simba rese mairi. Iwe unoda kuziva sei?
1 Kanganwa nezve kufungira zvisizvo kuvandudza hutano hwako
2 Zvizive iwe pachako zviri nani pabonde
3 Tsvaga nezve nyaya dzepabonde dzaunofarira
4 Dzivisa kuwira mutsika
5 Tsamira pane vanobatana nemufaro
Kanganwa nezve kufungira zvisizvo kuvandudza hutano hwako
Hatigone kudzivisa kutorwa nengano zhinji, dzinova dzinoitika muhupenyu hwedu. Asi ichi chimwe chinhu chatisingafanire kutevedzera kune iyo tsamba. Kwete chete mundima yebonde asi mune zvimwe zvinhu zvezuva redu nhasi. Kuti tifare, tinofanira kurega dzimwe pfungwa dzinotitadzisa kufara, kusanganisira rusaruro rwunotikomberedza nezve isu pachedu, vatinotamba navo kana zvepabonde zvakajairika.
Kukanganwa zvese ndeimwe yematanho ekutanga kunakirwa, ku tarisa pane izvo zvaunoda chaizvo kana zvaunoda. Chete kana iwe ukatora iyi nhanho, iwe unokwanisa kutanga kuvandudza hutano hwako. Kubva kutanga kubva pakutanga, hazvizonetse kuti iwe uzvibvumire kutakurwa kune zvitsva zviitiko, zvisinei nekuti ivo vanotii kana iwe uriwe unovasarudza.
Zvizive iwe pachako zviri nani pabonde
Zvinogara zvichinzi kuti tipe zvakanakisa zvedu kune vamwe, tinofanirwa kuzviziva isu pachedu. Kunyangwe zvingaite sezviri pachena, hazvingagare zvakadaro mundima yebonde. Sezvo tichingozvinakidza zvizere kana tichinyatso kuziva zvatinoda. Saka, zvinokurudzirwa kuti kugona kuzvionera ndeimwe yemapoinzi ekutanga kurapa. Iwe unofanirwa kuziva muviri wako zvakadzama, chii chinoita kuti utye kana izvo zvisina mhedzisiro kwauri. Ndokusaka pano paizouya kuzotora nhanho kumberi uye kuzadzisa fungidziro kana pamwe zvinotarisirwa mundima yebonde. Neiyi nzira iwe uchagara uchifadzwa zvakapetwa zvakapetwa, kungave wega kana sevanhu vaviri.
Tsvaga nezve nyaya dzepabonde dzaunofarira
Kuvhura huraoni zvishoma kunogara kwakanaka. Nekuti nekuda kwavo, isu tichakwanisa kuziva mimwe misoro yakati siyanei uye kunyatsoongorora mukati mayo, kana zviri izvo zvatinoda chaizvo. Saka, Imwe pfungwa yekufunga nezvayo kugadzirisa hunhu hwako kuzvikurudzira iwe mukuita kutsva, edza zvinhu zvitsva uye ramba uchidzidza padanho rega. Nekudaro, hazvikuvadze kuzvizivisa iwe pachako nezvenyaya dzezvepabonde izvo zviri patafura. Ehezve, ivo havasi vashoma, saka, iwe uchagara uchifanira kusarudza iyo inoita kuti iwe unzwe wakanyanya kunaka. Unogona kunyange kuwana inonakidza nyaya dzinobva kune vamwe vanhu.
Dzivisa kuwira mutsika
Iyo yekujaira inodzima chero chero spark yakakosha munyu wayo. Saka tinofanira kugara tichitiza kubva pairi. Sei? Zvakanaka Pane sarudzo dzakasiyana dzatinofanirwa kufunga nezvadzo, senzvimbo dzakasiyana kana zvinzvimbo uye nekuzvibvumira kutorwa nenjodzi idzo izvo, tisati tataura asi izvo zvinogara zvine basa rakakura pachinhu ichi. Kunyangwe uri wega kana sevanhu vaviri, shanduko dzinogara dzichiita nani, nekuti mavari uchawana iwo marasha ayo dzimwe nguva atinoshaya. Sezvo kana tikaramba tichienderera zvakafanana, tichangozviwana isu nehumwe huye kunyemwerera kuchakurumidza kutsakatika kumeso kwedu.
Tsamira pane vanobatana nemufaro
Kune akawanda, uye akasiyana kwazvo, erotic matoyi uye zvishongedzo nazvo kunakidzwa nezviitiko zvako zvitsva. Pfungwa dzekuda kwese, kunakidzwa wega kana sevanhu vaviri. Navo vese, iwe zvakare uchararama yakasarudzika nguva iyo ichaita iyo inonakidza kwazvo manzwiro auye kuhupenyu hwako. Zvayo, isu tinogona kutaura zvakanyanya echinyakare vibrator kune eotic cosmetic. Nyika inokodzera kuti iwe ugoiziva zvishoma. Yako, yehutano hwako uye yehupenyu hwako hwakawanda.
Ichokwadi kuti pamusoro pemapoinzi aya kana matipi ekuvandudza hunhu hwako, kuchine zvimwe zvakawanda zvakakumirira. Sezvo, sekuziva kwedu, iri nyika yakakura kwazvo iyo isati yawanikwa. Naizvozvo, kana iwe uchida kuenderera uchizviita zvakanaka kubva kumba kwako uye nekungodzvanya kamwe chete, une mukana wekutsvaga mashiripiti mapeji senge akasiyana siyana anokubatsira kusvika pakuziva iwe zvirinani, nakidzwa zvishoma uye wedzera iko kubata kwemanzwiro kuhupenyu hwako hwepabonde. Iwe unozowana maitiro matsva, matipi makuru uye zvinokurudzira zvauchazoda!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Utano » Hukama » 5 makiyi ekuvandudza yako pabonde uye uve anofara